राहतमा दाताको भर - Pradesh Today
Homebreaking-newsराहतमा दाताको भर
घोराही, २५ बैशाख ।
दाङका स्थानीय सरकार दाताको भरमा देखिएका छन् । लकडाउनको अवधिमा ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवारलाई प्रदान गरिने राहत दाताको भरमा पर्नुपरेको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा राहत माग्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरको फुड बैंकमा ३४ जना दाताले राहत सहयोग गरेको बताए । त्यसमा २२ हजार १ सय केजी चामल, १ हजार ४ सय ७५ केजी दाल, २ हजार ८ सय २० लिटर तेल, ७ हजार ४ सय ८० पिस साबुन, ३ हजार १ सय ५० केजी नुन दाताहरूबाट सहयोग भएको बताए ।
लसीपुरको मेयर विपद् कोषमा ४५ जना दाताबाट ५५ लाख ५ हजार ४ सय ५१ रूपैयाँ जम्मा भएको सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ७ हजार ९ सय ८ जना परिवारले राहत लगेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका विपद् ब्यवस्थापन शाखाका प्रमुख उमेश शर्माले ९० जना दाताहरूबाट चामल, दाल, नुन, साबुन सहयोग आएको बताए । त्यसैगरी कोरोना राहतकोषमा ब्यक्तिगत तथा संस्थागत गरेर ४३ लाख बढी रकम जम्मा भएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा ३ हजार बढी परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको बताए । सबै वडाबाट राहत कति वितरण गरियो भनेर पूरै डाटा कलेक्सन भई नसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले भने २० लाख रूपैयाँ कोरोना राहतमा सहयोग गरेको र त्यो रकम आइसोलेसन बेडलगायत स्वास्थ्य सामाग्रीमा खर्च गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय सरकारको अवस्था पनि यस्तै छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष तारा डिसीले राहत दिनको लागि दाताको भर पर्नुपरेको बताए । दिनप्रतिदिन राहत माग्ने संख्या बढ्दै गएको अध्यक्ष डिसी बताउँछन् । तर सरकारले कुनै राहत नपठाएको उनले बताए । ‘सरकारले कुनै राहत पठाएको छैन’ अध्यक्ष डिसीले भने दाताहरूको भरमा राहत वितरण गरेका छौं ।
कोही संघ, संस्था त ब्यक्तिगत रूपमा राहत प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कुनै चिनजानको आधारमा सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छु’ उनले भने ‘यसरी नि वडामा राहत वितरण गरेको छु ।’
छाक नै बसेको अवस्थामा भएको परिवारलाई प्राथमिकतामा राहत वितरण गर्ने गरेको उनले बताए । वडामा धेरैजसो मजदुरी गरेर खाने परिवार रहेकाले राहत माग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको उनले बताए ।
लकडाउनका बेला ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने, बिपन्न परिवारका प्रतिब्यक्ति पाँच केजी चामल, तेल, साबुन र दाल वितरण गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मा पनि राहत माग्नेको संख्या कम छैन ।
१४ नम्बरका वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीले पनि दाताकै भरमा राहत वितरण गर्ने गरेको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट भनेर कुनै राहत आएको छैन’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का वडा अध्यक्ष डाँगीले भने ‘दाताहरूले नगरलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, त्यो राहत वडामार्फत बितरण गर्छौ ।’
सरकारले लकडाउनको अवधिमा राहत वितरण गर्नको लागि राहत वितरण मापदण्ड मात्र बनाएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रतिब्यक्ति पाँच किलो चामल, दाल, साबुन, तेललाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने मापदण्ड बनाएकोले त्यही अनुसार राहत वितरण गर्ने गरेको उनले बताए ।
एक महिनाको अवधिमा करिब तीन सय परिवारलाई राहत वितरण गरेको उनले बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ मा दाताहरूले वडामै उत्पादन भएको वस्तुहरू किनेर विपन्न परिवारलाई राहत सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘दाताहरूले वडामा नै उत्पादन भएको चामल, दालहरू किन्नु हुन्छ अनि वडालाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ’ घोराही उपमहानगर–पालिका वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र बुढाले भने ‘यसरी नै राहत बितरण गरेका छौं ।’
सरकारको तर्फबाट विपन्न परिवारलाई भनेर कुनै राहत नआएको उनले बताए । अहिलेसम्म दुई सय ६२ परिवारलाई राहत बितरण गरिसकेको उनले बताए । दाताहरूको भरमा नै ज्याला मजदुरी गरेर खाने विपन्न परिवारलाई सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।